Posted by ကို Tranquillus | ဇူလိုင်လ 13, 2018 | ထွက်နိုင်ရေး
ယင်းနှင့်အတူအနန္တတန်ခိုးရှင် အင်တာနက်ကို လူတိုင်းနီးပါးက ဖိုင်မျှဝေခြင်းနဲ့ ရင်းနှီးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြီးမားတဲ့ဖိုင်တွေကို လွှဲပြောင်းရာမှာ အခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သေတ္တာများအသုံးပြုမှုကိစ္စများတွင် စာပို့Yahoo၊ Gmail... 25 MB ထက်ပိုသော စာရွက်စာတမ်းများကို ပေးပို့ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ Whatsapp ကဲ့သို့သော လူမှုကွန်ရက်များတွင် အများဆုံး ဖိုင်အရွယ်အစားမှာ 16 MB ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အချို့သော ပလပ်ဖောင်းများသည် ဤလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့်နေ့ကို တွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းကြီးမားတဲ့ဖိုင်တွေဝေမျှခြင်း။ ဤတွင် 18 ကြီးမားတဲ့ file တွေကိုပေးပို့ဖို့အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ နှင့်ကျောက်စာမရှိဘဲ။
WeTransfer တဦး ကြီးမားတဲ့ file တွေကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များပေးပို့ခြင်း အများဆုံးကမ္ဘာပေါ်မှာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်ရေးလိုအပ်ပါတယ်နှငျ့သငျတစ်ပြိုင်နက်နှစ်ဆယ်လူတွေနီးပါး2တစ်ခုချင်းစီကိုလွှဲပြောင်းအတွက်ဖိုင်များကို GB ကို, ဤပို့ပေးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ သင်၏ဖိုင်သိုလှောင်မှုတရားဝင်မှု2ရက်သတ္တပတ်မှကန့်သတ်သည်။ ဤအနှစ်ပတ်အတွင်းစဉ်အတွင်းအားလုံးအပ်လုဒ်တင်ပြီးဖိုင်များကို ZIP ဖိုင် format နဲ့ဖိုင်တွဲထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်။4ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတဲ့ကာလအတွက်အွန်လိုင်းသင်၏ဖိုင်တညျးနပေါ၏အချိန်တိုးချဲ့ဖို့, ထို့နောက်သင်ထုတ်ဝေသူရဲ့ site မှလိုင်စင်ရရှိရန်ရှိသည်။
ဘယ်နေရာမှာမဆို Send တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ကြီးမားတဲ့ file တွေကိုပေးပို့သည့် site ကို အကယ်၍ သင်သည် "တိုက်ရိုက်ပို့ရန်" ရွေးစရာကိုအသုံးပြုပါက download link ကိုထုတ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်ပို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်ရန်မလိုအပ်ပါကမှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ စာပို့ သင့်ဖိုင်ကိုဆိုက်သို့တင်ပြီးသည့်အခါဂဏန်းခြောက်လုံးပါသောကုဒ်သည်သင်၏ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာမည်။ ပေးပို့လိုက်သောဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အတွက်၎င်းကုဒ်သည်သင့်လက်ခံသူထံဆက်သွယ်ပြီး“ လက်ခံသူ” ပေးသည့် dialog box အောက်ရှိ site ထဲသို့ ၀ င်ရမည်။
SendBox တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ကြီးမားတဲ့ file sharing site ကို အရာအခမဲ့3GB အထိလွှဲပြောင်းရန်စွမ်းရည်ပေးပါသည်။ site ပေါ်တွင်ဖိုင်ရဲ့တည်ထောင်ခြင်းမှာ link တစ်ခုသင်သည်သင်၏လက်ခံရရှိသူထံသို့အီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့လင့်ထားသောစာမျက်နှာများထုတ်ပေးသည်။ files 15 ရက်ပေါင်းတဲ့ကာလအဘို့အဲဒီမှာသိမ်းဆည်းထားသည်။ သင်, အချိန်မရွေးရှယ်ယာသင်၏ဖိုင်များကိုရယူပိုမြန်သူတို့ကိုပို့ပေးပါရန်သင့် Device များထပ်တူပြုခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို PC နဲ့သင့်မှာ Android ဖုန်းပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲကို install ။
ဒီပလက်ဖောင်းတွင်ဖြစ်နိုင်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ကြီးမားတဲ့ဖိုင်တွေလွှဲပြောင်း4GB ကိုတစ်အသံအတိုးအကျယ်။ ဒါဟာတစ်နေ့တာ TransferNow နှုန်း 250 လွှဲပြောင်းတစ်ကန့်သတ်နိုင်ဖို့နီးပါး5လွှဲပြောင်းဖိုင်တွေလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ဖိုင်များကိုမျှဝေခြင်းစကားဝှက်ဖြင့်ကာကွယ်ထားနိုင်ပါသည်။ ဖိုင်တစ်ခုတည်းလွှဲပြောင်းစဉ်အတွင်းတစ်ပြိုင်နက်လူတွေ 20 လွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။ ဆဲ Freemium အကောင့်နဲ့သူတို့အဘို့မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့် 8 နေ့ရက်ကာလအဘို့ရက်ပေါင်း 10 နေစဉ်ဤဖိုင်များကို downloads, များအတွက် site ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
၎င်း၏နာမည်ဖြင့်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, Grosfichiers ခွင့်ပြုကြီးမားတဲ့ file တွေကိုပေးပို့4GB ကိုတစ်ဦးအလေးချိန်နှင့်အတူ။ ဒါဟာပလက်ဖောင်းသုံးစွဲဖို့တစ်ရိုးရှင်းပါသည်။ သငျသညျတစ်ပြိုင်နက် 30 အီးမေးလ်များကိုတစ်ဦးစုစုပေါင်းပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ site ပေါ်တွင်မျှဝေခံရဖို့ဖိုင်တွေကိုရွေးဖို့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံကြာပါသည်။ ဖိုင်များအားလုံးအပ်လုဒ်လုပ်ထားခဲ့ကြသည့်အခါ, သင့်လက်ခံရရှိသူတစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုရေးပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်နောက်ပိုင်းမှာသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ဖို့မက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်မဆိုဖိုင်တွေပေးပို့လို့ရပါတယ်။
C'est le ကြီးမားတဲ့ file တွေကိုပေးပို့သည့် site ကို စံပြ။ ခခြှေဲ လုံးဝအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ပြီးအလေးချိန်ကန့်သတ်ချက်မရှိပဲဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ ဒီဆိုဒ်တွင်စီးပွားဖြစ်ကြော်ငြာများပါ ၀ င်သည်။ ဖိုင်များသည်အများဆုံးတစ်ပတ်ကြာသည်။ သို့သော်ဤသက်တမ်းကာလကိုသင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီပြုပြင်နိုင်သည်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်သည့်အချိန်တွင်ဖော်ပြမည့်အကြောင်းအရာနှင့်ဒေါင်းလုပ်စာမျက်နှာ၏ဒီဇိုင်းကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်၏ဖိုင်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောကာကွယ်မှုအတွက်သင်၏လက်ခံသူများထံဆက်သွယ်ရန်စကားဝှက်များကိုထည့်နိုင်သည်။
pCloud ဖိုင်များကို5GB အထိပို့ပေးသည်။ ဤလွှဲပြောင်းခြင်း tool သို့ပြုပြင်မွမ်းမံမှုအသစ်များဖြင့်ဖိုင်အရွယ်အစား ၁၀ GB အထိပေးပို့နိုင်သည်။ ဒီပလက်ဖောင်းတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်စရာမလိုပါ။ အီးမေးလ်ဖြင့်ဖိုင်များကိုတစ်ကြိမ်လျှင်လက်ခံသူ ၁၀ ဦး သာခွင့်ပြုသည်။ ပလက်ဖောင်းသည်ဖိုင်အရွယ်အစားနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲစွဲမှတ်စရာကောင်းသည့် transfer speed ကိုပေးသည်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး လျှင်အခမဲ့သိုလှောင်မှုကန့်သတ်ချက်သည် ၂၀ GB အထိရှိနိုင်သည်။
Filemail အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည် ကြီးမားတဲ့ file တွေကိုပေးပို့သည့် site ကို။ ဖိုင် ၃၀ GB ကျော်ခွင့်ပြုသည်။ ဖိုင်များမှန်ကန်မှုကို ၇ ရက်သတ်မှတ်ထားသဖြင့်ကူးယူထားခြင်းသည်ဤ site ပေါ်တွင်အကန့်အသတ်မရှိဖြစ်သည်။ Filemail သည်သင်၏အီးမေးလ်နှင့်အလွယ်တကူပေါင်းစည်းနိုင်သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကိရိယာများအတွက် Android နှင့် iOS အတွက် application များနှင့် plugins များကိုတင်ပြသည်။ အသုံးပြုသူများအတွက်မည်သည့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းမျိုးမလိုအပ်ပါ။ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူ၊
ဒီတစ်ခု တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ကြီးမားတဲ့ file တွေကိုပေးပို့ခြင်း Open Source ဆော့ဖ်ဝဲ။ ဤ site ကိုသင်အပြည့်အ privacy ကိုအတွက်စာရွက်စာတမ်းများပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီဖိုင်အတွက်အများဆုံးအသံအတိုးအကျယ်သို့သော်ထို site ပေါ်တွင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့မပေးပါ။ timeout (တနေ့, တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်, တစ်လသို့မဟုတ်နှစ်လ) သင့်လိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်. ခြားနားသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်၎င်းသည်တိုက်ရိုက်ပထမဦးဆုံး download, ပြီးနောက် shared file ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီ site ပေါ်တွင်လျှို့ဝှက်၏ဒီဂရီမြင့်မားသည်။ ဝန်ဖိုင်တွေရန်ဒီကုဒ်နိုင်သူတို့မရှိဘဲ၎င်းတို့၏ server များပေါ်တွင် encrypted နှင့်သိမ်းဆည်းထားသည်။
file ကို Dropper
file ကို Dropper5GB ကိုအများဆုံးအရွယ်အစားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်ရေးအားလုံးယခင်ဆိုဒ်များနှင့်ဝသကဲ့သို့လိုအပ်ပါသည်။ site ပေါ်တွင်ဖိုင်သိုလှောင်မှုအချိန် 30 ရက်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်သည်သင်၏လက်ခံသူများဖို့ download link ကို share ဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်ထွက်ခွာမည်။ သင်ဤ platform ပေါ်တွင်ဖိုင်များကိုမဆိုအမျိုးအစားကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်စသည်တို့ကိုအသံ, ဗီဒီယို, ရုပ်ပုံများ, စာသားဖိုင်များ, ဖွင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အဆိုပါ download link ကိုသင့်ရဲ့အမျိုးမျိုးသောလက်ခံသူများနှင့်အတူ shared သို့မဟုတ်ဖိုရမ်များနှင့်အခြားဝဘ်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်မျှဝေနိုင်ပါသည်ထုတ်ပေးသည်။
Ge.tt ဒီနေရာမှာသာ 250 ကို MB ဖိုင်တွေရဲ့အရွယ်အစားကန့်သတ်နှင့်အတူမျက်နှာသစ်လည်း 30 ရက်ပေါင်းတဲ့ကာလအဘို့သိုထားကြသည်ဆောင်ရွက်သည်။ ဤ site Outlook, ကို iOS, Twitter နဲ့ Gmail ကိုများအတွက် extension များနှင့် applications များပေးပါသည်။ ရိုးရှင်းစွာအ drag and site ပေါ်တွင်ဖိုင်ကို load ဖို့ drop ။ ဒီပလက်ဖောင်းနှင့်အတူကဖိုင်တင်ဒေါင်းလုဒ်လင့်ခ်များအတွက်ပြီးစီးခဲ့သည်စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရွေးချယ်ထားသောဖိုင်တွင်ပြုလုပ်အွန်လိုင်းပြီးသားရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီအဘယ်သူမျှမအရွယ်အစားကန့်သတ်ချက် ကြီးမားတဲ့ file တွေကိုပေးပို့သည့် site ကို။ ဤနေရာတွင်နေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အဆိုပါ download link ကို (ထိုတစ်ခုတည်းလက်ခံရရှိသူပြောသည်နှင့်တစ်ခါသာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်) တစ်ခုတည်းကိုအသုံးပြုခြင်းအဘို့ဖြစ်၏။ သာအဆင်မပြေတာ, JusBeamlt ပေါ်တွင် download link ကို၏တရားဝင်မှု 10 မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချိန်ပြီးနောက်, ထို့နောက်သငျသညျသစ်တစ်ခုတစ်ခုတည်း download link ကို generate ရန်ရှိသည်။ ကျိုး download link များကို generate ကြောက်လန့်ဖိုင်တင်နေစဉ်အတွင်းပြတင်းပေါက်ပိတ်ဖို့ရန်သော်လည်းသတိထားပါ။ သင့်ရဲ့စာလက်ခံသူက shared ဖိုင်အားလက်ခံတွေ့ဆုံအဘို့ဤမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
ဒီပလက်ဖောင်းတွင်ဖိုင်၏သက်တမ်းကိုမိနစ် ၃၀ မှနှစ်ပတ်ကြာသည်။ Senduit သည်သင်၏စာရွက်စာတမ်းများ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်တင်ထားသောဖိုင်များသည်အများဆုံးပမာဏ ၁၀၀ MB သာရှိရမည်။ ဖိုင်ကိုသင့်လက်ခံသူနှင့်မျှဝေရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့တင်ပါ၊ ထို့နောက်သင့်ပုဂ္ဂလိက download link ကိုသင့်လက်ခံသူထံပေးပို့ပါ။ သင်၏အထိခိုက်မခံသောဖိုင်များကိုမည်သူ့ကိုမျှမ ၀ င်စေလိုပါကဤဆိုဒ်သည်အသုံးဝင်သည်။
ဤပလက်ဖောင်းသည်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူသူများ၏နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဖိုင်များအားလုံးနီးပါးဖြစ်သော PDF၊ ebook, audio, video စသည်တို့ဖြင့်ဖိုင်များပါဝင်သည်။ Zippyshare တွင် download limit မရှိပါ။ များစွာသောမတူဘဲ အွန်လိုင်းဖိုင်ခွဲဝေမှုက်ဘ်ဆိုက်များ ပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့ထက်လျော့နည်းဘာမျှရန်သိုလှောင်မှုကိုအာကာသကန့်သတ်သောဆိုက်န့်အသတ် disk space ကိုများနှင့်လုံးဝအခမဲ့ပေးထားပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်မေတ္တာရပ်ခံသို့မဟုတ်လိုအပ်ပါသည်မရှိပါ။
ဖတ်ရန် သင့်ရဲ့ Workspace ကိုစုစည်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဖိုင်တွေရဲ့တရားဝင်မှု ဤ website7နှင့် 14 ရက်ပေါင်းအကြားကွဲပြားခြားနားသည်။ ဖြစ်နိုင်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ကြီးမားတဲ့ဖိုင်တွေလွှဲပြောင်း လွှဲပြောင်းနှုန်း 10 GB ကိုအများဆုံးအသံအတိုးအကျယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့တစ်နေ့လျှင်ခွင့်ပြုလွှဲပြောင်း၏နံပါတ်မသတ်မှတ်ထားပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဖိုင်များကိုကန့်သတ်သတ်မှတ်ထားရသေး, တပြိုင်နက်မျိုးစုံလက်ခံသူများမှမျှဝေနိုင်ပုံရသည်။ တစ်ဦးကကိုယ်ပိုင်သတင်းစကားကိုသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုအရသိရသည်ဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းအတူလိုက်ပါနိုင်ပါ။ ဒီမှာဒေါင်းလုပ်အမြန်နှုန်းသင့်ရဲ့ connection ကို၏အရည်အသွေးအပေါ်အခြေခံသည်။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝင်ခွင့်ဖြင့်, လွှဲပြောင်းအလွန်သေးငယ်တဲ့ဖိုင်တစ်စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာပါတယ်။
အလွန်စိတ်ကြိုက်ပလက်ဖောင်းဒါဟာခွင့်ပြု ကြီးမားတဲ့ file တွေကိုပေးပို့ခြင်း တစ်ကြိမ်မှာတစ်ခုထက် ပို. လက်ခံရရှိသူဖြစ်သည်။ ဖိုင်ကိုအပ်လုဒ်ကိုကန့်သတ်အခမဲ့ဗားရှင်း 20 GB အထိဖြစ်ပါတယ်။ shared စာရွက်စာတမ်းများ7ရက်ပေါင်းတဲ့ကာလအဘို့ထို site ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ပလက်ဖောင်း၏ဗားရှင်းအသစ်တက်ဘလက်နဲ့စမတ်ဖုန်းများအတွက်အဆင်ပြေအောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်တွေဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းမြန်ဆန်ရိုးရှင်းပြီးလုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။
များစွာသောပလက်ဖောင်းမတူဘဲ ဝန်ဆောင်မှုများကိုအခွားဖိုင်ဝေမျှလိုင်းများ, Sendspace သငျသညျထိုကဲ့သို့သော Twitter နဲ့ Facebook မှာအဖြစ်လူမှုရေးကွန်ရက်များထံသို့တိုက်ရိုက်သင်၏ဖိုင်များကိုဝေမျှဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သငျသညျဖိုင်နှုန်း 300 MB အထိ upload တင်လို့ရပါတယ်။ ဖိုင်များကို Storage ကိုအချိန် 30 ရက်ပေါင်းမှာသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကအဖွဲ့များအကြားမျှဝေထူးခြားတဲ့ download link ကိုမှတဆင့်အလွန်ကန့်သတ်ကြောင်းဤနေရာတွင်သတိပြုရကျိုးနပ်သည်။ အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်ရေးတာဝန်ခံအခမဲ့သုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါသည်။ အနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောကလစ်နှင့်အတူသင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများမျှဝေပါ။
Catupload လုံခြုံနှင့်မျှမမှတ်ပုံတင်ရေးလိုအပ်သည်။ ဆိုက် interface ပေါ်မှာကြော်ငြာတစ်ခုမရှိခြင်းမှတ်သားဖို့ကျေနပ်သည်။ ဤ site4GB ကိုဖိုင်များကိုဖွင့်ပို့ပေးရန်မဆိုအသုံးပြုသူခွင့်ပြုပါတယ်။ သင်ဟာတစ်ခုခုကိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲမျိုးစုံကို formats အတွက်ကြီးမားတဲ့ file တွေကို load နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကတစ်ခုတည်း link ကိုသင့်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ file တွေကိုအသုံးပြုသည်နှင့်သင်သတ်မှတ်ကြောင်းအဆက်အသွယ်မှတဆင့်ကူးစက်သောဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအီးမေးလ်ဖြင့်သင်၏ဖိုင်များကိုပေးပို့ပင်ကာကွယ်မှုများအတွက် password ကို attach နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျထိုကဲ့သို့သောဗီဒီယိုများ, ဆော့ဖ်ဝဲ, PDF documents တွေအဖြစ်ကြီးမားသောဖိုင်တွေလွှဲပြောင်းရန်လိုလျှင်ဒီတော့ယခု ... ဤအအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများသင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မျှမှတ်ပုံတင်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်ဤပလက်ဖောင်းအတော်များများက iOS သို့မဟုတ် Android ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် applications များရှိသည်။ လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ smartphone ကနေကြီးမားတဲ့ကြီးမားတဲ့ file တွေကိုပေးပို့ဖို့တစ်ဦးကအမှန်တကယ်ပျော်မွေ့။
မှတ်ပုံတင်မရှိဘဲကြီးမားဖိုင်များကိုပေးပို့ဖို့အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ။ မေလ 13th, 2020Tranquillus
လွန်ခဲ့သောWeelearn ၏ဆောင်ပုဒ်: ကိုကွညျ့ရှုလေ့လာပါ
သင့်ရဲ့ Workspace ကိုစုစည်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?